PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-30 - Awubhoreki esithumba 1000 Thrills
Awubhoreki esithumba 1000 Thrills
Ayidumile le ndawo kodwa inentokomalo
Ilanga langeSonto - 2018-09-30 - Izindaba - ZOWAKHA MBATHA
KUGQUGQUZELWA ukuba izivakashi ziphume zivakashele nakwezinye izindawo ezingaphandle kwedolobha ethekwini, zingagcini nje ngokuzungeza ngaphakathi edolobheni.
Njengoba imboni yezokuvakasha sekubonakele ukuthi iyathuthuka kakhulu, izindawo zokuvakasha sezithe chithi saka kodwa kulezi zindawo ziningi futhi ezingagqamile.
Isithumba: 1000 Thrills ngenye yalezo zindawo ezingagqamile ethekwini.
Le ndawo isenchanga, kwesakwaximba isigodi, kanti isinabaphathi abasha abazimisele ukuyibeka ezingeni eliphezulu. Ngolwesine ngesikhathi yethulwa kabusha le ndawo, izimenywa bezingawuvali umlomo kanti nentokozo ibiphezulu, ufelix Hlophe, ongumsakazi wegagasi FM, eqhulula amahlaya.
Umnyango wezokuvakasha ngaphansi kukamasipala wetheku, nowezokuvakasha esifundazweni ubuyingxenye yalo mcimbi.
Kwenziwa izinto ezahlukene kule ndawo njengokubhucungwa komzimba, kutholakala ukudla kwesintu, ukuxhumana nomphakathi njengezangoma nezinduna, lokho okunikeza izivakashi ithuba lokufunda ngempilo yabantu basemakhaya.
Umnu Vusi Kweyama nonomcebo Langa, abangabaphathi bale ndawo futhi asebeyisingathe kusukela ngozibandlela (December), bethule izinhlelo ezintsha abanazo ukuqinisekisa ukuthi izivakashi ziyanethezeka uma zivakashile. Bathi bafisa yamukele lonke uhlobo lwezivakashi.
Umakhosi Msimanga, oyisekela likasihlalo we-1000 Hills CTO, uthi kuningi okumele kwenziwe ukugqugquzela ezokuvakasha ngokubambisana kosomabhizinisi abahlukene.
Kuthiwa abantu abaningi bathuthelana edolobheni kanti isikhalo sokugcwala kwetheku siphakanyiswe nangabedurban Green Corridors, abasebenza ukuhlanza ulwandle enyakatho yetheku, baphinde baseke namabhizinisi asafufusa emalokishini.
Umnu Kweyama uthi abakwenza kule ndawo benzela ukushintsha impilo yasemahhotela ngoba wona ayafana umhlaba wonke, nokwenza kungabi lula ukubona umehluko wendawo osuke uvakashele kuyona.
Imigudu okuhanjiswa kuyo izivakashi egudle umfula isetshenziswa ukulanda ngomlando kazulu, abantu baxhumane nemvelo.
Obemele umasipala wetheku, untombenhle Dlamini, uthe kuningi okungenziwa yizivakashi ethekwini, akudingi ukuthi zize ziye kwezinye izingxenye zesifundazwe.
“Sithwele kanzima olwandle ngoba bonke abantu bathutheleka khona. Siyazidinga izindawo ezinjengalezi, kodwa ukuze ziphumelele kumele kubanjiswane ukusabalalisa izivakashi. Sinezinhlelo zokumaketha konke okuthinta ezokuvakasha ngaphansi kwaleli dolobha njengoba amanxusa ethu ebesemcimbini WEDSTV Delicious, egoli, ngesonto eledlule. Omunye umcimbi omkhulu olandelayo esizomaketha kuwo izinhlelo ezifana nesithumba yimacufe enorth West kodwa ngeke kube yimpumelelo uma kungabanjiswene kulo mkhakha webhizinisi lezokuvakasha. Kunabathile abatshela abantu ukuthi kakuphephile ukuphuma emahhotela ngoba befuna ukugombela kwesabo, okungelona iqiniso (ukuthi akuphephile),” kuchaza untombenhle.
Izimenywa zinikezwe ithuba lokunambitha ukudla okutholakala kule ndawo nokubhucungwa izinyawo.
IZITHOMBE: ZOWAKHA MBATHA
IQEMBU lendlamu elinandisa esithumba 1000 Thrills.
NGABANIKAZI besithumba 1000 Thrills, unomcebo Langa novusi Kweyama.
ZINJE izindlu okulalwa kuzo esithumba 1000 Thrills.